Kulankii Baaqa Nabadda Somaliya oo Axadii, 23-ka May ka dhacay magaalada Minneapolis, MN. – Radio Daljir
Minneapolis, May 24 – Kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen Jaaliyada Soomaalida ee Gobolka Minnesota oo ay wahaliyaan kumaankun kale oo ka mid ah Jaaliyadahaha kale ee iyana Gobalkaasi dagan ayaan Shalay Ka dhacay Xurinta kubada kolayga ee looyaqano Target Center ka oo ku taal Badhatamaha Magaalada Minnapolis.
Kulan kan ayaa waxa si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen Haayda Caalamiga ah ee Liftkids iyo Uruka New Faces of America oo ka hawl gala Gobalka Minnesota.
Munaasibdan oo aheyd tii ugu horessay ee nooceeda ah oo abid laga sameeyo Gobalkan ayaa waxa lagu dhawaaqay Maalinta Nabada Soomaliya iyada oo u jeedada guudna ay ahyen sidii loo bilaabilahaa waji cusub iyo dhaqan nabadeed isla markaasina hoosta looga xariiqilahaa Jid nabadeed hor leh oo cusub oo ay Qurba joog ta Soomaliyeed hormood ka noqoto. Sidoo kale kulankan waxaa lagu soo ban dhigay Dhaqanka Soomaaliyeed wax iyana sidoo kale Mihrajaan Dhaqameed soo ban dhigay qoomiyado kala Duwan o oay ka mid yihiin Native Americanka, Latinada , Asian American ka iyo waliba African American ka.
Munaasibadan Malaalinta Nabada Soomaaliya oo ay goob joog ka ahaayeen culumo awdiin, hogaamiyayaasha Bulshada, aAqoonyahano iyo dhamaanba qeybaha kala gadisan ee ay bulshadu ka koobantahay oo ay wahelinayaan ku dhawaad Kun qof oo ah umada Soomaliyeed eek u nool gobolkaasi. Kulankan ayaa waxa lagusoo jeediyey qudbado aad u xiiso badan sida isla markaasina xanbaarsanaa fariimo xigmadaysan oo ku aadan sidii loo nabadayn lahaa Soomaaliya ee ay bulshadu isu cafiyi lahyd iyada oo loo baahanyahay in beesha caalamkuna ay qeyb libaax uga qaadan lahayd.
Ugu horeentiiba waxa hadalka Furay Abdifatah Mahamed Abdinur oo ah Madaxa ururka New Faces of America islamarkaana ahaa xiriiriyaha Shirka ayaa waxa uu yiri ?aynu bilowno Maalin Cusub, aynu meel dhigno waxayaabaha aynu ku kala duwanahay oo aynu diirada saarno waxyaabaha aynu iskaga midka nahay iyo danta guud. Aynu ka gudubno mushaakilka dadkeena iyo naafaynta dadkeena.? Abifatah ayaa ku cel ceshay waa in Nabad loo helaa Soomaaliya taas oo ay shacab kii iyo dadkii halkaasi isugu yimina ku gacan siiyeen oo u sacaba tumeen, kagana daba dhawaaqeen.
Kadibna waxa uu hadalka ku wareejiyey Fatxiya Maxamed Absiye oo ah Suxufiyad madaxbanaan iminkana ka shaqaynaysa Filim ka Sheekeenaya Dhibaatda Dhaliinyarada Qurbaha. Fadxiya ayaa Hadalkeedi ku bilowday waa maalin Quruxbadan waan ururinaya neecawdii Nabada. Fadxiya oo ah dhalinyarada ku kurtay Qurbaha ayaa waxay tiri, waligay waxaan ahaa qof aaminsan in hindise kasta iyo hiyiga bani?aadanku uu yahay mid la gaari karo. Inkasta oo ay adag tahay bay tidhi Fadxiyi, in mar marka qaarkood la bilaabo talaabo cusub ay haboon tahay in la tijaabiyo hiyi cusub lana bilaabo dhamaad iyo dhaxal gal wanaagsan. Cawaaqib xumada ugu tayada darani waxay tahay markaa waxbaba la tijaabin oo weli dabada la hayo dawgii hore loogu wiiqmay. Sidaa daraadeed aynu tiyaabino Jidka nabada ayey Fadxiyo tiri. Fadxiyo o hadalkeedi sii wadata yaa caanaanatay raga Soomaliyeed. Waxayna sheegtay in ay iyaku dhibaatada wadaan isla markaasina ay masuul ka yihiin waxa ka dhacaya Soomaaliya oo ay iyaka keliyahi xal u helikaraan dhibaatada ka jirta haysata dadkooda iyo dalkooda. ?Qofka bani?aadanka ahi waa inuu qirtaa khaladkiisa si uu u saxo ayay tidhi Fatxiyi, si loo bilaabo dharaar hor leh? Fadxiya ayaa qudbadeedii kusoo gebagebaysey gabay ama Poem calaacal ah oo dadkii halkaasi isugu yimi aad u qiiro geliyey.
Waxa isna halkaasi ka hadlay Sheekh Xasan Jaamici o ah Qereen wax ka dhiga Jaamcad kutaala Magaalada Minneapolis Imaana ka ah Masjidka Dacwa. Sheekh Xasan oo isagu ka hadlay muhiimada nabada iyo waxay diintu ka qabto ayaa sheegay in diinta Islaamka ay muslimiinta farayso abuurida iyo xajinta Nabada. Sheekh Xasan ayaa hoosta ka xariiqay in ay Soomaaliya Nabad u baahan tahay maanta Barina anaay Sugi kareen.
Saciid Axmed Gaashaan oo ka mid ah Aqoonyahanada gobalka dagan, in badana ka shaqaynayey arimaha Bulshada ayaa isna halkaasi ka jeediyey qudbad aad u cilmiyaysan oo uu kula hadlayey Bulshada caalamka. Waxana uu sheegay in sida lawada ogyahayba ay mar marka qaarkood dagaaladu yihiin talaabooyin lagama maarmaan u ah hiigsashada nabada, hadana waa in uu dagaalku noqdaa mid leh bilow iyo dhamaad oo la og yahay hadafka iyo ujeedada laga leeyahay dagaalkaasi. Gaashaan waxa uu intaasi raaciyey in dhibaatada iyo dagaalada Soomaaliya ay haatan noqdeen kuwo taxane ah oo aan la fahmi Karin ula jeedada iyo xataa qadiyada dagaaladaasi ka socda dalka Soomaaliya. Waxana uu Gaashaan kusoo gebagebeeyey qudbadiisii in maadaaba uu caalamkii haatan noqday hal magaalo oo keliya ama Global Village ay lagama maarmaan tahay in beesha Caalamku ay si daacad ah wax uga qabato. Waayo buu yidhi dagaaladaasi haday sidaa ku sii socdaan saamayn wayn ayay ku yeelanayaan guud ahaanba beesha caalamka. Waana masuuliyad saaran awoodaha aduunka in xal loo helo dhibaatada Soomaaliya ayuu kusoo geba gebeeyey Gaashaan qudbadiisii.
Maxamed Hussein (Gudbaaye) oo ah masuulka labaad ee ururka ‘Somali Cause’. Isla markaasina ka mid ahaa dadkii iyaku isku soo dubaridey kulankaasi baaq nabadeedka ahaa. Gudbaaye waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada aadka ugu heelan arimaha bulshad ee gobolka. Waxana halkaasi ka qudbadeeyey ayaa isgana qudbadiisii ku bilaabay, manta waa maalin quruxbadan. Isu imaatinkiina halkan iyo sida balaadhan ee aad ugasoo qayb gasheen baaq nabadeedkanina waxa uu ina tusaya sida aad dyaarka ugu tihiin in loo helo helo nabad iyo deganaansho Soomaaliya. Waxan aad iyo aad ugu faraxsanahay ayuu yiri Gudbaaye, in aad manta halkan usoo wada istaagteen una midaysanthiin in umada Soomaaliyeed hesho sinaan iyo cadaalad uu udub dhexaadkeedu yahay nabad waarta oo lagusoo hirto. Gudbaaye ayaa isaga oo qudbadiisii sii wata waxa uu intaasi raaciyey in dalka Maraykanku yahay wadan ay duntiisa ku tidcantahay u dagaalka cadaalada iyo xornimada caalamka iyo sidii dadwaynaha aduunku meel walba oo ay ku noolyihiin dhamaanba u heli lahaayeen nabad iyo cadaalad ay ku waari karaan. Waxana uu tusaale u soo qaatay ereyo taarikhi ah oo uu lahaa Martin Luther King oo ahaa halyeeygii madoobaa ee usoo halgamey cadaalada iyo sinaanta dadka madoow ee Maraykanka. Waxana ka mid ahaa ereyadaasi, ?Cadaalad daro ka jirta meel ka mid ah aduunku, waa cadaalad daro ka jirta meel walba oo aduunka ah.? Gudbaye ayaa qudbadiisii kusoo geba gebeeyey in hadii aynu si daacad ah u qaybsano awooda iyo maamulka dalkeena aynu dhamaanba u midoobi karno nabada dalkeena Soomaaliya.
Waxa isna kulankaasi ka hadlay Sheikh Sacad Muuse oo ka mid ah culima awdiinka ugu waawayn gobolka Minasota isla markaasina ah agaasimaha uruka Nabada aduunka ama World Peace Organization. Waxa ka mid ahaa qudbadii Sheikh Sacad Muuse oo ahayd tii lagusoo gebageeeyey kulankaasi, in ay umada Soomaaliyeed wax ka bedesho caadada foosha xun ee colaada ah oo loo baahanyahay in aynu biloowno caado cusub oo ku salaysan nabad iyo kala dambayn sida ay diinta Islaamku ina farayso. Waxana uu Sheikh Sacad Muuse intaasi raaciyey in la gaadhey wakhtigii tusaale muuqda loosoo qaadan lahaa caado nabadeeda iyo sida ay diinta Islaamu u quwayso ama ay u qiimayso nafta qofka bani?aadanka ah oo aynu aduunka ugu muujin lahayn fariintaasi ay diinteenu ina farayso ee udub dhexaad keedu yahay nabad, nabad iyo amaan ayuu yidhi Sheikh Sacad Muuse. Sheikh Sacad Muuse ayaa masuuliyiintii halkaasi isugu timi ku gudoonsiiyey ubaxii nabada.
Waxyaabahii ugu xiisaha badnaa ee halkaasi ka dhacay ayaa waxakale oo iyana ka mid ahaa, fanaankii caanka ahaa ee reer Minasota axmed Cabdiwaaxid Gaashaanle ( Axmed yare) oo isagu halkaasi ku muujiyey bandhig faneed aad u heer sareeya isla markaasina qaaday hees qiiro gelisey dhamaanba dadkii halkaasi isugu yimi oo ahayd heestii caanka ahyd ee (Afrikaa Qaylisoo) Sidoo kale waxa isna hees Maraykan ah oo qiiro iyo dhiirigelin ah ka qaaday fanaanka da?da yare e magaciisa la yidhaahdo Kay Hussein. Waxakale oo iyana kulankaasi wacdaro layaab leh ka dhigay dhaliinyaro kale oo isgu jirta ardayda Soomaalieed iskuulad gobolkaasi Minasota. Waxana aysoo bandhigeen cayaarahii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo weliba gabayo iyo suugaan isugu jirey Af-Soomaali iyo English labadaba. Dhaliinyaradan oo ay qaarkood u hadlayeen dadka aan iyaku codka haysan ee ay dagaaladu aafeeyeen, sida hooyooyinka, caruurta iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee uu haadku ka dhergey. Dhaliinyaradan oo aan badankoodu arag ama ku garaadsan Soomaaliya ayaa ka tiraanyooday dhibaatada haysata dadkooda ee aadka u daba dheeraatay.
Qore: WiilWaal – [email protected] and [email protected]
Sawir qaade: Maxamed A. Bashir – [email protected]